Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Real Valladolid.… (Yaa ka maqan yaase ku soo baxay?) – Gool FM
(Madrid) 25 Jan 2020. Zinedine Zidane ayaa wuxuu ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee kaga qeyb galaya kulanka horyaalka La Liga ay habeen dambe booqan doonaan naadiga Real Valladolid.
Real Madrid ayaa isku diyaarineysa kulanka ay habeen dambe ku booqan doonaan kooxda Real Valladolid garoonka Jose Zorrilla, kaasoo ka tirsan kulamada 21-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Real Madrid ayaa rajeyneysa inay ka faa iideysato guuldarradii ay kooxda Barcelona kala kulantay Valencia, kaddib markii loogu awood sheegtay 2-0, Barca ayaana sii lahaan doonta 43 dhibcood oo ay wadaagaan Real Madrid, kahor kulanka haben dambe ee Valladolid iyo Real.
Zinedine Zidane ayaa liiskan ugu yeeray 19-ka ciyaaryahan uu ula safri doono kulanka Real Valladolid, waxaana liiskan dib ugu soo laabtay kabtanka kooxda Sergio Ramos iyo James Rodríguez.
Laakiin taasi badelkeeda tababare Zinedine Zidane ayaa wuxuu go’aansaday in liiskan uu ka reebo xiddigaha kala ah Dani Carvajal, Marco Asensio, Eden Hazard iyo Gareth Bale oo dhaawac soo gaaray, sidoo kale Vinícius Júnior iyo Brahim Díaz.
Haddaba halka hoose kaga boggo liiska xiddigaha kooxda Real Madrid uu ku dhawaaqay tababare Zinedine Zidane, kuwaasoo ka qeyb galaya kulanka habeen dambe ee Real Valladolid:
Chelsea oo u soo baxday wareega Shanaad ee koobka FA Cup kaddib markii ay ka adkaatay kooxda Hull City… +SAWIRRO